Yakka Ittisuun Biyya Misoomsuu dha!
Hojiin poolisii inni duraa yakka ittisuu dha!
Kan si hordoofu waan jiruuf fakkii gaarii ta’ii!
Leenjiin ogummaa, qulqullinaa fi bu’aa hojii poolisiitiif murteessaa dha!
Waajjirri Tajaajiila Poolisii Hawaasaa Ijaramee Eebbifamee
Kabajamoo komishinara Komishinii Poolisii Oromiyaa Ibrahiim Hajii Muhammad waltajjii sirna eebbaa kanarraatti kabajan argamun akka dubatanitii nageenyii buu’ura dimookiraasii, guddinaa fi badhaadhinaati; nageenyii bakka hinjirreetti waa’ee dimookiraasii, misoomaafi guddinaa gonkuma yaaduu hindanda’amu jedhaniiru. Dubbisa Dabalataa
Ittisa Yakkaa irratti xiyyeeffachuudhaan Leenjii Kenname
Leenjichii Komishinii Poolisii Oromiyaatti Poolisoota dubartii Eegumsa addaa VIP Caaffee Oromiyaa ramadamanii jiraniif kan kennamee yeemmuu ta’u, Waltajjii leenjichaa hasawaan kan banan Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’imanii Oromiyaatti Ittigaafatamtuu Damee Leenjii fi Barnootaa addee Faxumaa Adaam akka dubatanitii leenjii hubannoo qabsiisuu Qajeelfama Naamuusaa Ogummaa Poolisii Oromiyaa, Faayidaa Qusannoo fi barmaatilee dubaatii hafoo dubartootaa fi daa’imanirraatti raawwataman ittisuuf .... Dubbisa Dabalataa
Qorannaa Yakkaa Keessatti Olaantummaan Seeraa Haala Ittiin Kabajamu
Qorannoo yakkaa fi murtii haqaa kenniisiisu ilaalchisee hojiiwwangama kanan raawwataman gochoota yakka gugurdoo kan akka ajjeechaa lubbuu nama, hanna meeshoole al-ergee fi al-galee, yakkoota siyyasa dawoo gochudhaan rawwatamaan, saamicha meesha waranattin deegaramudhaan rawataman, balaa tiraafikaa, miidhaa dubartoota fi daa’imani fi ... Dubbisa Dabalataa
Balaa Tirafikii Ittisuu Ilaalchisee Hojiiwwan Hojjetaman
Akkuma beekamu guddina teekinooloojiitii fi giloobalaayizeshiniin walqabate baayinni konkolaataa gara biyya keenyatti gala jiru yeroo irra gara yerootti haala ariiffata ta’een dabala dhufa jira. Baayinni konkolaataa fi bal’iinni karaa/daandii walsimuu dhabuu isaa irra kan ka’een balaan tirafikii babal’achaa jira. Dubbisa Dabalata
Copyright 2016 Oromia Police Commission